အရှင်ကုသလသာမိ (အတည်မဲ့) – စကန်ဒီနေဗီးယားတိုင်းပြည်များသို့ ခရီး (အပိုင်း ၅) | MoeMaKa Burmese News & Media
အရှင်ကုသလသာမိ (အတည်မဲ့) – စကန်ဒီနေဗီးယားတိုင်းပြည်များသို့ ခရီး (အပိုင်း ၅)
ည ၁ နာရီကျော်ခန့်ရှိပြီ။ ရထားက နောက်ကျမှာ သေချာနေသည်။ မတတ်နိုင်။ ဟန်နိုဗာဘူတာက ရထားပြန်ထွက်တော့ ခရီးသည်များအားလုံး ရထားထွက်ခါစကလို လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ပြန်ဖြစ်သွားသည်ဟု ထင်သည်။ ဂျာမနီ စသော ဥရောပနိုင်ငံများရှိ ရထား၊ ဘတ်စ်ကားများနှင့် လက်မှတ်စစ်ကိစ္စကို ဆွစ်ဇာလန်သူနှင့် ပြောဆိုဖြစ်သည်။ ဂျာမနီရှိ မြို့တွင်းပြေးဆွဲသော ရထား၊ ကားများပေါ်တွင် လက်မှတ်စစ်သည်ဟူ၍ တွေ့ရခဲသည်။
ဂျာမန်လူမျိုးများသည် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် သီလစောင့်ထိန်းဆုံးလူမျိုးဟူ၍ ဂုဏ်ယူကြသည်။ ရထားလည်း ခိုးမစီးကြဟု ဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စပယ်ယာဟူသော အပိုလူတစ်ယောက်ပါတာတောင် အချို့က မလိမ့်တပတ်နှင့် ကားခမပေးလိုကြကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရထားများ၊ ကားများအကြောင်း ပြောပြသည့်အခါ ဆွစ်ဇာလန်သူက အားရပါးရ ရယ်လေသည်။
ဂျာမနီရှိ မှတ်တိုင်များတွင် လက်မှတ်ဖြတ်ရသည့် စက်တစ်ခု ထားရှိသည်။ ထိုစက်တွင် ကိုယ်သွားလိုသောမှတ်တိုင်ကို ရွေးချယ်ပြီး စက်ထဲကို ပိုက်ဆံထည့်ကာ လက်မှတ်ဖြတ်နိုင်လေသည်။ လက်မှတ်များကတော့ (မြန်မာငွေနှင့်တွက်လျှင်) ဈေးကြီးပါသည်။ အနိမ့်ဆုံးလက်မှတ်ခမှာ ယူရို ၂ ကျပ် ၆ဝ ပြားခန့်ဖြစ်သည်။ မြန်မာငွေနှင့်ဆိုလျှင် ၃ဝဝဝ ကျော်နီးပါးရှိပါမည်။
ယူရို ၂ ကျပ် ပြား ၆ဝ သည် ခရီးတို အသွားလက်မှတ်အတွက်သာ ဖြစ်သည်။ အပြန်ပါဆိုလျှင် ၅ ကျပ်နှင့် ပြား ၂ဝ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် တစ်နေ့စာ စီးနိုင်သော Day Ticket နှင့် တစ်လစာ၊ တစ်နှစ်စာ စသည်ဖြင့် လက်မှတ်အမျိုးမျိုး ရှိပါသည်။ စုစုပေါင်း ၅ ယောက်အထိ စီးနိုင်သော Group Ticket လည်း ရှိပါသေးသည်။ Group Ticket အတွက် ယူရို ၁ဝ ကျပ်ခန့် ပေးရသည်။ မှတ်တိုင်တိုင်းတွင် ထားရှိသော လက်မှတ်ဖြတ်သည့်စက်တွင် ငွေထည့်ပြီး ဝန်ထမ်းမလိုဘဲ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၂ ကျပ် ပြား ၆ဝ ကျသင့်သည့်လက်မှတ်အတွက် ၅ ကျပ်တန် ထည့်လိုက်လျှင် လက်မှတ်နှင့်အတူ ပြန်အမ်းငွေကလည်း ၁ ပြား/ ၂ ပြားကအစ အပိုအလို မရှိ၊ အတိအကျ ထွက်လာသည်။ မည်သို့ တီထွင်ထားကြလေသနည်း။ လူ(ဝန်ထမ်း)ကမှ အချိန်ကြာဦးမည်၊ မှားကောင်း မှားနေဦးမည်။ စက်ကတော့ နည်းနည်းမှ မမှား။ အံ့သြဖွယ်နည်းပညာများပါတကား။
လက်မှတ်မစစ်တတ်ပါဘဲလျှက် ခိုးမစီးတတ်ကြသောလူမျိုးများအကြောင်းကို တွေးမိတိုင်း မလေးစားဘဲ မနေနိုင် ဖြစ်ရပါသည်။ အစိုးရကလည်း အစိုးရတာဝန်ကျေပွန်ရေးအတွက် ပြည်သူ့အခိုင်းအစေ ပီသစွာဖြင့် ပြည်သူများ စိတ်အေးချမ်းသာအောင်၊ သွားရေးလာရေး စိတ်ချမ်းမြေ့ရလေအောင်၊ အချိန်ကုန်လူပန်းမဖြစ်ရလေအောင် စီမံဆောင်ရွက်ပေးထားသည်။
ပြည်သူ့အခိုင်းအစေများပီပီ ပြည်သူထံမှ၊ တိုင်းပြည်ထံမှ တစ်နည်းအားဖြင့် တိုင်းပြည်၏သယံဇာတထဲမှ မည်သည့်အရာကိုမှ အမြတ်မထုတ်။ အစိုးရဟူသည် ပြည်သူကို အလုပ်အကျွေးပြုရန်နှင့်တိုင်းပြည်ကို ချမ်းမြေ့အောင်၊ သာယာအောင်၊ တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်ရန်ဟူသော တာဝန်ကို အပြည့်အဝ ထမ်းဆောင်ရမည်ဟု တာဝန်သိပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ပုံရသည်။ တာဝန်သိကြသဖြင့် တာဝန်ရှိမှုကို နားလည်သည်။ ထို့ကြောင့် တာဝန်ယူကြသည်။ သူတို့တိုင်းပြည်များ၏ တာဝန်သိမှု၊ တာဝန်ရှိမှု၊ တာဝန်ယူမှုများကို တွေ့မြင်သိရှိလေတိုင်း ရွှေပြည်ကြီးက စိတ်အချဉ်ပေါက်စရာ အခြေအနေများက ရင်ထဲမှာ တွန်းထိုးလှုပ်ခတ်ပြီး ဝင်လာခဲ့လေသည်။
အိပ်ပျော်နေရာမှ နိုးလာတော့ မိုးက လင်းနှင့်ပြီ။ နာရီကြည့်ဖို့ ဖုန်းကို ဖွင့်လိုက်တော့ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံထဲ ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ သင်ဟာ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံထဲ ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အိုဗာဆီးခေါ်လျှင် တစ်မိနစ်ကို ဝ.၂၂ ဆင့် ကျသင့်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဖုန်းလက်ခံလျှင် ဝ.ဝ၅ ဆင့် ကျသင့်ပြီး မက်ဆေ့ပို့လျှင်တော့ ဝ.ဝ၇ ဆင့် ကျသင့်မှာဖြစ်ကြောင်း မက်ဆေ့ဝင်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ဂျာမနီမှ ဒိန်းမတ်ပြောင်းလဲသွားသော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင် ရှုခင်း၊ သစ်ပင်များ၊ တောတောင်များ၊ စိုက်ခင်းများ၊ လမ်းများကတော့ ထူးထူးခြားခြား မရှိလှဟု ထင်သည်။ နောက်ဖေးအခန်းထဲသွားကာ မျက်နှာသစ်သည်။ အပေါ့အပါးသွားသည်။ မနက်စာအဖြစ် ဂျာမနီက မမိုးဇင်မာ ထည့်ပေးလိုက်သော လိမ္မော်သီး၊ ဆီးသီးများနှင့် ကျောင်းက ယူလာသော ပေါင်မုန့်ကို စားလိုက်သည်။ အခန်းတွင်းမှာရှိသောသူများကိုလည်း ဆီးသီးစားဖို့ ပေးသည်။ အခြားသူများက လက်ကာပြသည်။ ဆွစ်ဇာလန်သူကတော့ ကျေးဇူးဟုဆိုကာ စားသည်။
“ဒီနေရာမှာတော့ ငါ့မှာ ကြွားစရာရပြီကွ”ဟုဆိုကာ မြန်မာလူမျိုးများဟာ ပေးရကမ်းရတာ အလွန်ဝါသနာပါကြောင်း၊ အချို့အကြွေးတင်ခံပြီးတောင် လှူတတ်ကြကြောင်း၊ အလှူအတန်းရက်ရောသည့်တိုင်းပြည်များစာရင်းတွင် မြန်မာက ထိပ်တန်းနိုင်ငံများစာရင်းတွင် ပါဝင်ကြောင်း ပြောပြဖြစ်သည်။ မြန်မာတို့ အလှူအတန်း ရက်ရောကြပုံများကို ပြောစဉ်က အလွန်တရာ အံ့အားသင့်နေသောအမူအရာဖြင့် “Oh! My God. Really?”ဟု ဆိုလေသည်။
ရထားက အချိန်မှားနေပြီဖြစ်သောကြောင့် လာသမျှ ပုံမှန်ရထားများကို လမ်းဖယ်ပေးနေရလေသည်။ ရထားက မကြာခဏ ရပ်သည်။ မထူးတော့ပြီ။ “တစ်နေ့ တစ်လံ၊ ပုဂံ ဘယ်ပြေးမလဲ” ပြောနေကျစကားလုံးက ခေါင်းထဲရောက်လာသည်။ ပုဂံ ဘယ်ပြေးနေပါသလဲ။
မိုးက တဖွဲဖွဲ ရွာချလာသဖြင့် ရာသီဥတုက အေးစက်လာသည်။ လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကို တင်းတင်းရင်းရင်း ဆုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်နေမိသည်။ စိုက်ပျိုးနေဆဲ ဂျုံခင်းများ၊ ရိတ်သိမ်းပြီးသော ဂျုံခင်းများနှင့် အခြားစိုက်ခင်းများကို ငေးမောရင်း လိုက်ပါလာခဲ့သည်။ လေအားလျှပ်စစ်တာဝါတိုင်ကြီးများ နေရာအနှံ့တွေ့နေရသည်။ လျှပ်စစ်မီး ခဏခဏ ပျက်တတ်သော မြန်မာပြည်ကို အမှတ်ရမိသည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့များ အမိမြေအောက်မှ ထွက်ပေါ်သော်လည်း ပြည်သူအတွက် အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ မရှိသေးသည်ကို တွေးမိတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။ ထားပါလေ … ငါ ပျော်စရာပဲ တွေးရင်း ခရီးသွားမယ်ဟု တွေးကာ စိတ်ပြောင်းလိုက်သည်။
ရထားစပီကာမှ အသံပေါ်လာသည်။ ပထမ ဒိန်းမတ်လို၊ ဒုတိယ ဂျာမန်လို၊ တတိယ အင်္ဂလိပ်လို။ စိတ်နည်းနည်း ရှုပ်သွားသည်။ “ဒီရထားက အကြောင်းကြောင်းကြောင့် နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။ အိုးဒန်ဆီမြို့၊ ကိုပင်ဟေဂင်မြို့သို့ ထွက်ခွါမည့် ခရီးသည်များကတော့ ဒီရထားပေါ်မှာပဲ ရှိနေလို့ ရပါတယ်။ အောလ်ဘော့မြို့ …… သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွါမည့် ခရီးသည်များက ရှေ့မကြာခင် ရပ်တော့မည့် ကိုးလ်ဒင်းမြို့ဘူတာတွင် ဆင်းပါ”ဟု ကြေညာသည်။
အို … ဒုက္ခပါပဲ၊ ကိုယ်က အခုမှ ရောက်ဖူးတာ၊ အဆင်ပြေပါ့မလား မသိဘူးဟု တွေးမိသည်။ သို့ရာတွင် အလွန်အကျွံ စိုးရိမ်စိတ်တော့ မဖြစ်မိပါ။ ဘဝအတွေ့အကြုံအရ အခက်အခဲများ၊ အဆင်မပြေမှုများကို ချစ်လာတတ်သောစိတ်ကလည်း ထူးဆန်းစွာ ဝင်လာသည်။ အခက်အခဲများ ကြုံလေလေ၊ အဆင်မပြေမှုများ တွေ့လေလေ စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာများ ကြုံတတ်လေလေ ဖြစ်ပါသည်။
“ကဲ ငါ ရှေ့ဘူတာမှာ ဆင်းတော့မယ်၊ ငါက ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ ပြောရဦးမယ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအရ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တွေ့ဆုံခြင်းဟာ ရှေးဘဝတွေက ဆွေမျိုးတော်ခဲ့ဖူးလို့ တွေ့ကြတာ၊ အခု တို့အခုလို တွေ့တာလည်း ရှေးက အကြောင်းတရားတစ်ခုကြောင့် တွေ့ရတာ၊ မင်းနဲ့ တစ်ညတာ တွေ့ဆုံစကားပြောခွင့်ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကံ မကုန်သေးဘူးဆိုရင်တော့ ပြန်ဆုံကြသေးတာပေါ့”ဟု နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။ သူကလည်း ဆွစ်ဇာလန်ရောက်ရင် သူ့ဆီကို ဆက်သွယ်ဖို့ နေအိမ်လိပ်စာကို ပေးလိုက်သည်။ ဓာတ်ပုံအတူရိုက်ကြသည်။ မိုးကလေးက ဖွဲနေသည်။ လေကလေးများလည်း တိုက်နေသည်။ ရထားလမ်းဘေးမှာ ဆောင်းမရောက်ခင် လူးလူးလွင့်လွင့် ဖူးပွင့်နေကြသော ရောင်စုံပန်းလေးများကိုလည်း တွေ့လိုက်ရသည်။
ကိုးလ်ဒင်း (Kolding)ဘူတာ ရောက်ပြီ။ မိုးရွာလို့လား မသိ၊ ကိုးလ်ဒင်းက ကိုးလ်(အေး)ပါသည်။ အောလ်ဘော့သို့ သွားမည့်ရထားများ ရှိမလားဟု ဆိုက်မည့်ရထားများကို ရေးထားသော LCD များကို လိုက်ကြည့်သည်။ တစ်စီးမှ မတွေ့။ မိုးက ရွာ၊ လေက တိုက်တော့ ပါးပြင်နှင့်နားရွက်များ အေးစက်လာသည်။ ဘူတာထဲမှာလည်း လူက အနည်းငယ်သာ ရှိသည်။ စီးကရက်သောက်သူက သောက်၊ ကော်ဖီခွက်လေးများကိုယ်စီကိုင်လျက် ကော်ဖီသောက်သူက သောက်။ အချို့စုံတွဲများကလည်း တစ်လောကလုံး သူတို့နှစ်ယောက်တည်းသာ ရှိသည့်နှယ် ကလူ၏သို့ မြူ၏သို့။
“အင်ဖော်မေးရှင်းကောင်တာ ဘယ်နားမှာလဲ”ဟု လူငယ်တစ်ဦးကို မေးလိုက်သည်။ စောသေးသဖြင့် မဖွင့်သေးဟု ဆိုသည်။ သူက “ဘယ်ကို သွားချင်တာလဲ”ဟု မေးသည်။ အောလ်ဘော့ကို သွားချင်တာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြတော့၊ အနီးဆုံးခရီးကို ပြောပြမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖရက်ဒဲရီစီယာ(Fredaricia)ဘူတာသို့ နောက် ၅ မိနစ်မှာ ရထားလာမည်။ ထိုရထားကို စီးပြီး ဖရက်ဒဲရီစီယာဘူတာတွင် ဆင်းရမည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် အောလ်ဘော့မြို့သို့သွားမည့်ရထားကို စီးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြသည်။
သို့နှင့် ဖရက်ဒဲရီစီယာရထားပေါ် တက်လိုက်သည်။ ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာသည့်အခါ ဖရက်ဒဲရီစီယာဘူတာသို့ ရောက်သည်။ ဘူတာတွင် အောလ်ဘော့သို့သွားမည့်ရထားကို လိုက်ရှာရပြန်သည်။
2 Responses to အရှင်ကုသလသာမိ (အတည်မဲ့) – စကန်ဒီနေဗီးယားတိုင်းပြည်များသို့ ခရီး (အပိုင်း ၅)
Khin Maung Saw on October 25, 2014 at 8:39 pm
ဂျာမနီမှာလည်းရထားခိုးစီးသူတွေရှိပါတယ်။ မရှိဘူးဆိုတာထက် ရထားခိုးစီးသူတွေအရမ်းနည်းတယ်ဆိုတာကပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာလင်မှာ မြေပေါ်မြေအောက်ရထားတွေ၊ ဘတ်စ်ကားတွေ၊ ဓာတ်ရထား (tram or street car)တွေပေါ်ကို လက်မှတ်စစ်တွေ ရှောင်တခင်တက်လာပြီးစစ်လေ့ရှိပါတယ်။ တခါတလေ လက်မှတ်စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားပါတယ်။ အများအားဖြင့်ကတော့ သာမန်အဝတ်အစားနဲ့ခရီးသည်လိုလိုတက်လာပြီး ရထားတွဲ၊ ဘတ်စ်ကား၊ ဓာတ်ရထား တံခါးတွေပိတ်ပြီး စထွက်တော့မှ သူ့မှုထမ်းကဒ်ပြားထုတ်ပြကာ သူဟာ လက်မှတ်စစ်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြီး လက်မှတ်စစ်ပါတယ်။ စတိအဖြစ်တတွဲဘဲ စစ်တတ်ပါတယ်။ လက်မှတ်မရှိဘဲခိုးစီးသူတွေမိရင် ယူရို ၄၀ ဒါဏ်ငွေပေးရပါတယ်။ လက်မှတ်မရှိဘဲခိုးစီးသူတွေမိတဲ့အခါတွေရှိသလို လက်မှတ်မဲ့စီးသူမပါတဲ့ အခါတွေလည်းရှိပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ”လသုံးလက်မှတ်”ရှိပေမဲ့ အိမ်မှာမေ့ကျန်ခဲ့လို့ လက်မှတ်စစ်ချိန်မှာမပြနိုင်ရင် လက်မှတ်စစ်က ကိုယ့်နာမည်၊ လိပ်စာအတိအကျနဲ့ ယာယီ ယူရို ၄၀ ဒါဏ်ငွေလက်မှတ်ပေးထား ပါတယ်။ နောက်တနေ့မှာ သူတို့ရုံးချုပ်မှာ “ကိုယ့်လသုံးလက်မှတ်”နဲ့ ဒီယာယီ ယူရို ၄၀ ဒါဏ်ငွေလက်မှတ် ကိုပြပြီးဖြေရှင်းလိုက်ရင် ယာယီ ယူရို ၄၀ ဒါဏ်ငွေလက်မှတ်ကိုပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ပြီး ကိုယ်လက်မှတ်မပြနိုင်ခဲ့တဲ့ တရက်စာလက်မှတ်ဖိုး ၇ ယူရို လောက်ပဲဒါဏ်ရိုက်ပါတယ်။
Dr. Maung Maung Gyi on October 26, 2014 at 3:28 am
Civil servant ကို မြန်မာလို ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဟုသာ ဘာသာပြန်သင့်ပါသည်။ ပြည်သူ့အခိုင်းအစေဟု ရင့်ရင့်သီးသီးမခေါ်သင့်ပါ။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများ၌ အစိုးရဆိုသည်မှာပြည်သူအများစုက မိမိတို့ယုံကြည်သည့်သူများ ကိုရွေးချယ်ပြီး မိမိတို့ကိုယ်စားအုပ်ချုပ်ရန် တာဝန်ပေးထားသည့်အဖွဲ့သာဖြစ်ပါ သည်။ ပြည်သူအများစုကမိမိတို့ ကိုယ်စားအုပ်ချုပ်ရန် တာဝန်ပေးထားသည့်အဖွဲ့ကို ယုံကြည်မှုမရှိတော့လျှင်မဲမပေးတော့ဘဲဖြုတ်ချနိုင်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် မိမိတို့ ကိုယ်စားအုပ်ချုပ်ရန် တာဝန်မပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်သူများသည် အစိုးရ၏နင်းပြားမဟုတ်သကဲ့သို့ အစိုးရသည်လည်း ပြည်သူ့အခိုင်းအစေ မဟုတ်ပါ။ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်သာဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများသည်လည်း ပြည်သူတို့အတွက်ကျရာနေရာတွင်ဆောင်ရွက်ပေးရသည့်သူများသာဖြစ်ပါသည်။ ” ပြည်သူ့အခိုင်းအစေ”မဟုတ်ပါ။